Evergreen Bagworm Moths (Thyridopteryx ephemeraeformis)
Izilwanyana kunye Nendalo Iifutshane neeMoths
Iimpawu kunye neempawu ze-evergreen i-Bagworm Moths
Ukuba awuqhelekanga nge-bagworm, awunakukubona kwiindawo eziqhelekileyo kwididi yakho. Ukuguqulwa ngobuqhetseba kwiingxowa zabo ezenziwe ngamagqabi omthi womthi, i- Thyridopteryx ephemeraeformis izilwanyana zondla imisedare, i-arborvitae, ijunipers kunye nezinye izinto ezizithandayo zemimandla.
Naphezu kwegama lakhe lomnxeba, iTyridopteryx ephemeraeformis ayiyimbongolo , kodwa i-moth. I-bagworm iyaphila umjikelezo wayo wobomi ngaphakathi kwokhuseleko kwesikhwama sayo, esakhiwa ngesilikiti kunye neentsimbi ezinamaqabunga.
Ifom ye-larval ibonakala i-worm-like, ke igama elithi bagworm.
Ukuchonga i-bagworm kwindawo yokudinga idinga iliso elihle elikwazi ukuqonda ukuxhamla kwazo. Ngenxa yokuba i-bagworm ixhaphaza imithi ehlala eluhlaza, izikhwama ezimdaka zingakhange zihoywa ekuqaleni, zibonakala njengezidiza zembewu. Khangela izikhwebu ezinommiselo ezinamaqabunga omdaka obomileyo, ukuya kuma-intshi ama-2 ubude, ezifanisa iinaliti okanye amaqabunga emithi.
I-moth yindoda endala kuphela yashiya ukukhuselwa kwesikhwama sayo xa ilungele ukutshata . I-moth ibumnyama, ngamaphiko acacileyo ajikeleza ngokuyi-intshi ngaphesheya.
I-Order - Lepidoptera
Usapho - i-Psychidae
Genus - Thyridopteryx
Izibungu zeBagworm zondla emaqabini omthi wesibini kunye neziqhamo ezinqabileyo, ngokukodwa ezi zityalo ezithandayo: umsedare, i-arborvitae, umjunipha kunye ne-cypress yamanga. Ukungabikho kwemikhosi ekhethiweyo, i-bagworm iya kudla amahlamvu malunga nayo nayiphi na imithi: i-fir, i-spruce, ipineyini, i-hemlock, i-sweetgum, i-sycamore, inkumbi yenkwenkwe, kunye nenkumbi emnyama.
Amathuku amadala awayondli, ahlala ixesha elaneleyo lokutshata.
I-Bagworm, njengawo onke amabhu, ihamba ngokugqitywa kwe-metamorphosis ngezigaba ezine.
I-egg: Ekupheleni kwehlobo kunye nokuwa, inkazana ibeka amaqanda angama-1 kwimeko yakhe. Emva koko ushiya isikhwama sakhe kunye namaconsi emhlabathini; amaqanda angaphezulu .
I-Larva: Ngasekupheleni kwentwasahlobo, izibungu ziyaqhaqhaza zize zihlakaze kwiintambo eziluhlaza.
Ngokukhawuleza baqala ukondla nokwakha iingxowa zabo. Njengoko zikhula, izibungu zikhulisa izikhwama zazo ngokufaka amahlamvu amaninzi. Bahlala ngaphakathi kwokhuseleko lweengxowa zabo, banamathela iintloko zabo ukuze batyathele kwaye baphathe iikhwama ezisuka kwisebe ukuya kwisebe. Inkqonkqo iwa phantsi komgca wezantsi wesikhwama esakhiwe ngekona ngokuvula.
I-Pupa: Xa izibungu zifikelela ekuvuthweni ngasekupheleni kwehlobo kwaye zilungiselela ukuba zifake, zifake iingxowa zazo phantsi kwegatsha. Ingxowa ivalwe ivalwe, kwaye izibungu zijika entloko ngaphakathi kwesikhwama. Isigaba se-pupal sineeveki ezine.
Abadala: NgoSeptemba, abadala bavela kwiimeko zabo. Amadoda ayishiya iibhegi zawo ukuze athabathe ekufuneni abafazi. Abafazi abanamaphiko, imilenze, okanye i-mouthparts, kwaye bahlala ngaphakathi kweengxowa zabo.
Ulungelelwaniso oluKhethekileyo kunye neMiqathango
Ukukhusela okungcono kwe-bagworm yesikhwama sayo sifike, sigqityiwe kulo lonke ujikelezo lobomi. Isikhwama sivumela ezinye izibungu ezikhuselekileyo ukuba zihambe ngokukhululekileyo ukusuka kwindawo ukuya kwindawo.
Iifama zamabhinqa, nangona zigcinwe kwiingxowa zazo, zitshatile abafazi ngokukhulula i-pheromones yesini esomeleleyo. Amadoda ayishiya iibhegi zawo ukuze athole amaqabane xa eqonda ukuphaphaza kweekhemikhali ukusuka kwabesifazane.
I-Bagworm ihlala kuyo nayiphi na indawo ifanelekileyo izityalo ezikhoyo, ngokukodwa amahlathi okanye imihlaba ngemisedare, umjunipha, okanye i-arborvitae.
E-US, i-bagworms isuka ukusuka eMassachusetts esezantsi ukuya eFlorida, kwaye entshonalanga kuya eTexas naseNebraska. Le nkathazo ivela eNyakatho Melika.
I-Silver-Spotted Skipper (Epargyreus clarus)
Iingcali Ziyazi Njani Ixesha Lokufuduka?
Yintoni i-Monarch Butterflies Eyidlayo?
Iingozi ze-Butterflies: I-Karner Blue
Iisongelo zokufuduka kweMonarch
Ukubhiyozela i-Sacred Masculine
IsiNgisi sase-Italian-English Dictionary: A
Iran | Iinkcukacha kunye neMbali
Gwema ezi zindleko ze-Halloween kuzo zonke iindleko
Iingxabano ezinkulu kwi-Olympic Gymnastics
Zama Ukungabi Ukuhleka Kweziganeko Ezi-17 Eziyingqungquthela Ezimnandi!
21 Abaphumeleleyo beNobel yoKhuseleko eMzantsi wase-United States
Izixhobo zeNkolo zeGnosticism